Google Stadia Pro: yemahara kwemwedzi miviri yekunakidzwa | Linux Vakapindwa muropa
Google Stadia Pro: yemahara kwemwedzi miviri
Kana iwe uri kufunga kunakidzwa nemavhidhiyo emitambo muzhizha rino, unogona kushandisa Google kushambadzira sevhisi. Zvakare, ikozvino unogona kunakidzwa Stadia Pro (iyo premium vhezheni) yemwedzi miviri mahara. Naizvozvo, unogona kuzviedza usingashandisi imwe euro uye uone kana zviri izvo chaizvo zvauri kutsvaga kana kwete ... Iwe hauna chaunorasikirwa! Uye iwe unoziva kuti zvisinei yako Hardware kana chikuva, inoshanda pane yakawanda masisitimu uye zvishandiso.
Kana iwe uchifarira izvi Mwedzi 2 yekupa mahara, unogona kuzviedza izvozvi. Iwe unongofanirwa kuwana iyo chikuva webhusaiti yepamutemo Mitambo yeGoogle yemavhidhiyo, kunyoresa uye kutanga kunakidzwa nenguva iyoyo. Uku kunaka kwekambani yeinjini yekutsvaga kuri nekuda kwehosha, nokudaro ichichengeta mamirioni avanhu achivaraidzwa sezvavanopinda mukuvhara uye vachikutadzisa kubhadhara munguva dzino dzematambudziko.
Chiyero chakatorwa nekambani yeMountain View chinokanganisa Stadia Pro mu Nyika dze14 mune ino chikuva inowanikwa. Naizvozvo, kana iwe usina kumboshinga kuyedza kugona kweichi chiitiko chekushambadzira, ikozvino unogona kuchiedza uye kutamba mitambo yese yevhidhiyo muStadia Pro raibhurari, uye zvimwe chete zvaunowana, senge GYLT naTequila Mabasa.
Munozviziva izvozvo Mutengo chaiwo ndeye € 9,99 pamwedzi, saka unogona kusevha ingangoita € 20 uchinakidzwa nemazita senge GRID, Destiny 2: Iyo Unganidzo, Thumper, Mutambi Asingazivikanwe HondoGrounds, Yakakomba SAM, uye zvimwe zvakawanda.
Kuti ugone kunakirwa, iwe unofanirwa chete kuwana iyo yekubatanidza iyo yandakakusiira kare, nyora (kana iwe usati uine Pro kunyorera), tora iyo Stadia app pane Android, iOS kana PC yako, zvimwe ChromeCast-inoenderana zvishandiso, nezvimwe. (Unofanirwa kunge uchitoziva kuti iyo Hardware haina kukanganisa mhedzisiro), uye shandisa inoenderana USB controller (HID standard) kana mbeva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Google Stadia Pro: yemahara kwemwedzi miviri
Dhijitari yegoridhe chiyero. Chikumbiro chaTrump's Mumiriri kuFederal Reserve